(Gudaha) Musiibada muuqata: Beeraleyda iyo Hurricane Florence - Relief Musiibo ee Musiibada
Home/updates/(Gudaha) Musiibada muuqata: Beeraleyda iyo Hurricane Florence
Xitaa iyada oo aan lahayn duufaan waxyeello leh, shaqaaluhu waxay la kulmaan aafo aafo ah, musiibo joogto ah oo aan la arki karin oo ku saabsan mushaharka hoose, xaaladaha shaqada ee aan aaminka ahayn, neefta ICE ee luquntooda, tuugada mushaharka, iyo xitaa addoonsiga maanta. Ururada jecel sida Isbahaysiga Shaqaalaha Immokalee, Beeraleyda United, Iyo Gudiga abaabulka Beeraha waxay ka shaqeynayaan sidii ay u badali lahaayeen xaqiiqadan.
Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha beerta, isbeddelku dhakhso uma imaan karo. Intii lagu jiray daadadka Hurricane Florence, Saraakiisha gobolka ayaa iska indhotiray wicitaanada 911 ee ka imanaya shaqaalaha muhaajiriinta ah ee beeraha ka tagay kuna xannibmay fatahaadda, oo mar labaad caddeynno inaan dhammaanteen nahay waxaan nahay oo aan isku hallayn karno maamulka ama “khubarada” waqtiyada dhibaatooyinka. Waa inaan midba midka kale la joognaa.
Post-Florence, shaqaalaha beeraha ee North Carolina waxay sii wadaan inay si tabar daran uga shaqeeyaan tubaakada, baradhada macaan, iyo beeraha kale. Xaaladaha qaarkood, shaqaaluhu waxay lugeynayaan lug ka badan dhul beereed fatahaad ah oo qodaya baradhada macaan. Baradhada caaryada dhogorta leh waxay ku jiraan hal baaldi, baradhada caaryada wasakheysanna waxay galaan mid kale. Shaqaalaha lama siinayo mushaharka ugu yar, laakiin taa bedelkeeda waa la bixiyaa .40 - .50 senti halkii baaldi ee shaqadan culus, waxaana loo hanjabay haddii ay soo sheegaan xad gudub.
Dad badan oo ka shaqeeya beeraha ee North Carolina waxay ka maqnaayeen shaqada toddobaadyo kadib Hurricane Florence. Tan iyo duufaanta, waxaan si joogto ah u heleynay cunno ku habboon dhaqan ahaan iyo agabyo kale oo aan toos ugu baahnaa gacanta shaqaalaha soogalootiga ah.
Waxaan hadda aqbalnaa tabaruceyaal gacan ka geysanaya kuwan iyo dadaallada kale ee Hurricane Florence iyo dadaallada soo kabashada. Waxaan si gaar ah u adeegsan karnaa dad badan oo ku hadla Isbaanish, shaqaale xirfad leh, iyo dad waayeyaal ah, laakiin shaqada jirdhiska iyo wadayaasha ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Waxaan dadka ka codsaneynaa inay sameyaan ballan-qaad maalin ah 4-14. Haddii aad xiisaynayso, emayl u dir [Email ilaaliyo]
Si kasta oo aan u maqalno dhowr jeer, ereyadaasi had iyo jeer waa kuwo qoto dheer, waxayna naga dhigaan qalbi jaban oo indhahayaga la dagaallama ilmada: "Waxaad tahay gargaarkii ugu horreeyay ee aan aragnay."
Waan ognahay in musiibada aysan ku bilaaban Hurricane Florence. Shaqaale jooga muhaajiriin ka soo jeeda bulshooyinka Florida, ilaa North Carolina, ilaa California waxay maalin walba la halgamayaan dhibaatooyinka socda waxayna noogu yeerayaan inaan dhinac isla socono oo aan aragno kacaan dhanka warshadaha beeraha oo hubinaya sharaf iyo nabadgelyo, shuruudo shaqo oo loogu talagalay dhammaan shaqaalaha beeraha. Waxaan sidoo kale ognahay inay jiraan waqtiyo wadajirka uusan u ekaanaynin socod, laakiin taa beddelkeeda frijoles, tortillas, iyo maraqa kulul ayaa la wadaagaa iyada oo aan la door bidaynin doorka ama gacmaha aabanimada.
Haddii gacmahaagu ay doonayaan inay ku soo biiraan kuwayaga, haddii cagahaagu aad u baahan yahay si ay isu helaan iyagoo lugaynaya, waxaa jira shaqo badan oo la qaban doono. Oo waxaan ku koobnayn oo keliya fikradaheenna.